နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါကိုကိန်းနှစ်ခု၏ပါဝါလျှင်စစ်ဆေးပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ
နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ
Tags: နည်းနည်းခြယ်လှယ် bits သင်္ချာ
ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ် ကိန်း နှင့်ရည်မှန်းချက်မှာကိန်းပြည့်သည်နှစ်စွမ်းအားဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် 'စွမ်းအားတစ်ခုလုံးအဖြစ်ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။2'' ။
နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ၏ C ++ အစီအစဉ်
Two Leetcode Solution ၏စွမ်းအား၏ Java Program
နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါကိုအချိန်ရှုပ်ထွေး
နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ၏အာကာသရှုပ်ထွေး
အသေးအဖွဲဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကိန်း၏အဓိကအချက်များအားလုံးရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ '2' ဤနည်းလမ်း၏အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုသည်အိုဖြစ်သည် (log2N) ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Bit ကိုင်တွယ်ခြင်း၏အကူအညီကိုယူနိုင်သည်။
"နှစ်လုံး၏စွမ်းအားရှိသောမည်သည့်နံပါတ်မဆို binary ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုတည်း bit ကိုသာသတ်မှတ်နိုင်သည်"
တစ် ဦး တည်းသာရှိကြောင်းမည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း တစ်ခုတည်း bit နဲ့ set အဆိုပါ binary form မှာ?
နံပါတ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ၊ x ။
အခု x ကနှစ်ခုရဲ့စွမ်းအားရှိမယ်ဆိုရင် (x - ၁) လူအပေါင်းတို့သည်ပိတ်ပါလိမ့်မယ် ညာဘက် -bits set bit နဲ့ ('0' ဟုသတ်မှတ်ပါ) နှင့် set bit သည် unset ဖြစ်လိမ့်မည်။
x = 8  x - 1 =7
ဒီတော့သုံးပါ BITWISE-AND ကိန်းရှင် (x - 1) ကိန်းတစ်ခုကနှစ်ခုရဲ့စွမ်းအားရှိသလားလို့ပြောနိုင်တယ်။ x ကို & (x - 1) = 0
ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့် ဆက်၍ စားပါ '2' ကခွဲလို့မရပါဘူးသည်အထိ '2' တော့ဘူး.
x & (x - 1) သည်သုညနှင့်ညီလားဆိုတာစစ်ဆေးပါ
ဟုတ်လျှင်နံပါတ်သည်2၏စွမ်းအားဖြစ်သည်
ကိန်းစစ်မဟုတ်ရင်2ရဲ့စွမ်းအားမဟုတ်ဘူး
bool powerOfTwo(int n)
while(n %2== 0)
return (n == 1);
int n = 16;
cout << "Yes" << '\_n';
cout << "No" << '\_n';
//16 & 15 = 0
return (n & (n - 1)) == 0;
public static boolean powerOfTwo(int n)
Naive ချဉ်းကပ်မှု၏အချိန်ရှုပ်ထွေးသည် အို (log2N), ဘယ်မှာ N ကို = ပေးထားသောကိန်း။ သို့သော်အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်နည်းသည် Bitwise-And ကဲ့သို့လျင်မြန်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည် အို (၁)
ပရိုဂရမ်တွင်သုံးသောနေရာသည် function လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နေရာကိုအသုံးပြုသည် - အို (၁)
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: Apple, နည်းနည်းခြယ်လှယ်, bits, လွယ်ကူသော, သင်္ချာ post navigation
မျှမျှတတ Binary Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်
Binary Tree Leetcode Solution ၏အနည်းဆုံးအနက်